A Nikkei report this week has indicated that Apple plans to make the case of the next AirPods earphonesawireless charger for the iPhone. On the surface, the report offers more questions than answers. The current AirPods case can neither receive (a Qi-compatible case has been announced, but isn’t shipping) nor transmit wireless charging,...
ကြည့်ရှု့သူများ : 3435
OpenAI,aresearch lab co-founded by Elon Musk, has developedanew breed of AI agents that are capable of playing Dota 2,acomplex strategy game, in 5-on-5 multiplayer matches. OpenAI’s new bots have so far been able to beat amateur and semi-professional teams. With this accomplished, the research lab is now looking to bring its bots to...
ကြည့်ရှု့သူများ : 3506
တရုတ်နိုင်ငံမှ အောင်မြင်သော Startup ခြောက်ခု
တရုတ်နိုင်ငံမှ အောင်မြင်သော Startup ခြောက်ခုတရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် ChinaBang Awards 2018 ဆုပေးပွဲကို TechNode မှ မကြာသေးခင်က စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆု ပေးပွဲကို တက်ရောက် ဖို့ အတွက် တရုတ်ပြည် တွင်းမှာရှိကြတဲ့ အလားအလာအရှိဆုံး Tech Startup တွေနဲ့ Investor တွေကို ဖိတ်ကြား ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုအောင်မြင်ပြီး အလား အလာ အရမ်း ကောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ လ...
ကြည့်ရှု့သူများ : 3684
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ စာကြည့်တိုက်နံရံပေါ်က ဆုံးမစာ အချက်(၂၀)
(၁) ဒီအချိန်မှာ အိပ်ငိုက်နေလျှင် မင်း အိပ်မက်မက်လိမ့်မည်။ ဒီအချိန်မှာ ကြိုးစားလျှင် မင်းအိပ်မက် အကောင်ထည်ဖော်နိုင်မည်။(၂) ငါ လစ်လျှူခဲ့သောယနေ့သည် မနေ့က နောက်ရက်တွင် ပျက်စီးလိုသောသူ၏ဆုတောင်းခြင်းပင်။(၃) အချိန်နှောင်းပြီဟု ထင်လိုက်သောအချိန်သည် အစောဆုံး အချိန်ပင်ဖြစ်သည်။(၄) ယနေ့အလုပ်ကို နောက်နေ့အထိမဆွဲပါနှင့်။(၅) စာကြိုးစားချိန် ပင်ပန်းတာဟာ တခဏပါ။ မကြ...
ကြည့်ရှု့သူများ : 4069
Convenient communication and fitness features arrive on the Watch this fall.SAN JOSE—Just three years after the release of the first Apple Watch, Apple announced the fifth iteration of its wearable operating system at WWDC 2018.Unlike iOS updates, most watchOS updates haven't brought drastic changes to Apple's device in terms of look and fe...
ကြည့်ရှု့သူများ : 5784
Apple didn't shy away from criticizing Silicon Valley rival Facebook Monday at its annual Worldwide Developers Conference in California.Why it matters: The feud is part ofabigger battle brewing between the two companies over their governing philosophies and practices."We think privacy isafundamental human right ... I think the privacy t...
ကြည့်ရှု့သူများ : 3668
55 - 60 of ( 61 ) records